မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးရေး ဘက်စုံဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov သည် ယနေ့နေ့လည် (၁၂) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Jan 30, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paw R.Seger သည် ယနေ့နေ့လည် (၂) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Jan 26, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် လာရောက်တွေ့ဆုံ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မိတ္ထီလာခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသီဟဇော်သည် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက် (၂၃-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက မောင်တောဒေသရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားနိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ် (၁) စီး ထောက်ပံ့ပေးအပ်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ် (၁) စီးအား ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရမှတစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့မွန်းလွဲ (၃) နာရီအချိန်က ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး (စစ်တွေ) ၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် လျာထားလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Jan 22, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံး (စစ်တွေ) ၌ (၂၁-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် လျာထားလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင်သည် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) နှင့် ကယားပြည်နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Jan 19, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင်သည် (၁၁-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၇-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) နှင့် ကယားပြည်နယ်များသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်။
by Thinmbadm1n / Jan 18, 2017 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားအား ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ (၃) နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး (တောင်ကြီး) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်စား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး
by Thinmbadm1n / Jan 15, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်၊
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းဝေ GERT မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြိုးမင်းဆွေနှင့် တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Jan 13, 2017 / comments
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းဝေအား နည်းပညာသုတေသနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဖလှယ်ရေးအဖွဲ့ (GERT) မှ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြိုးမင်းဆွေသည် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Jan 12, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်အား ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Domenico Scalpelli သည် ယနေ့နေ့လည် (၂) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့ (မြောက်ပိုင်း) ရှိ နှစ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း မိသားစုများအား လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထာမှု အကူအညီ ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့နေ့လည် (၁) နာရီအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြသခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Jan 09, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးဘေးလုံခြုံရေး အတွက် စစ်ဆေးအကြုံပြုခြင်းနှင့် ဟောပြောပို့ချ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇) ကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Jan 06, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆